Ogaden News Agency (ONA) – Shir Dib Uheshiisiin Ah oo Kasocda Magaalada Baabili.
Shir Dib Uheshiisiin Ah oo Kasocda Magaalada Baabili.
Shir balaadhan oo lagaga hadlayo colaada dabada dheeraatay ee Soomaalida iyo Oromada ayaa Kasocda Dagmada Baabili ee Gonolka Faafan ee wadanka Ogadenia.
Kulankan oo furmay maalinnimadii shalay oo Khamiis ahayd ayaa lagu wada hadashiinayaa Odayaasha Soomaalida iyo kuwa Oromada oo mudo dheer kudagaalamayay deegaanada Xuduuda Oromia iyo Ogadenia kuteedsan.
Labada qoomiyadood oo daris iyo walaalaba ah ayaa lasiyaasadeeyay colaadooda, waxaana siwayn uga faa’iidaystay kooxdii TPLF ee wadanka ka arimin jirtay, kuwaas oo hurinta colaada usoomaray labada maamul ee Soomaalida iyo Oromada.
Saraakiisha Ciidanka Mulatariga Itoobiya ee aagaas ayaa gacan kagaysanaya wada hadashiinta odayaasha waxaana, waxaana lasheegayaa in shirku uu soo af meermi doono maalinta bari ah hadii Alle Idmo.
Ilo wareedyo kusugan magaalada Baabili ayaa sheegaya in uu jiro is af garad wayn oo laga gaadhay colaadii gacan kusamayska ahayd, taas oo lagu dhibaateeyay dad badan oo Shacabka Soomaalida Ogadenia kamid ah, iyo waliba dad shacab ah oo Oromo ah.